Inona ny ECN | Mianara ny tombontsoa amin'ny tena USN Forex Broker
Inona ny ECN Forex Trading?
ECN, izay mijoro Network Communication Network, tokoa no fomba amin'ny ho avy ho an'ny Market Exchange Foreign. ECN azo faritana tsara ho toy ny tetezana mampifandray ireo mpandray anjara tsena kely miaraka amin'ny mpamatsy vola amin'ny alàlan'ny orinasa FOREX ECN.
Ny ECN dia toy ny tetezana eo amin'ny mpandray anjara kely amin'ny tsena sy ny mpamatsy vola azy. Fantatra ihany koa ho toy ny rafitra fifanakalozana ara-barotra (ATS), ECN dia tamba-jotra misy solosaina ahafahana mivarotra vola sy tahiry ivelan'ny fifanakalozana mahazatra.
Tsara ny manamarika fa ny fifampiraharahana rehetra dia natao tamin'ny alohan'ny taona 1970, miaraka amina e-varotra efa misy tamin'ny taona 80. Tamin'izany fotoana izany, saika ny varotra elektronika rehetra dia tamin'ny alàlan'ny rafitra fifandraisana matotra namboarin'ny Reuters, antsoina hoe Reuters Dealing.
Ny rafitra ara-barotra elektronika maoderina dia nidina voalohany tamin'ny taona 90 tany am-piandohana nanomboka nifanentana tamin'ny mpividy sy ny mpivarotra mba ho lasa tsenam-bidin'ny sandam-bola. Tsy ny tambajotram-pifandraisana elektronika dia tsy nisy teo aloha; raha ny marina dia efa nisy izy ireo nanomboka ny faran'ny taona 1960 nefa tsy nampiasa varotra raha tsy efa tamin'ny taona 90 tany ho any.
Zavatra Voalohany Voalohany - Fantaro ny mpiambina anao
Ny tsena Forex dia voalaza fa isan'ny iray amin'ireo tsena malaza indrindra ho an'ireo mpivarotra kely kokoa. Eto, ny tombony dia azo amin'ny fihenam-bidy bitika indrindra amin'ny tsiroaroa vola. Ary tsy sahala amin'ny fifanakalozana ara-barotra na ny fananana, ny fifanakalozana fifanakalozana vahiny dia tsy atao amin'ny fifanakalozana fifanakalozana efa misy.
Fa kosa, mitranga eo anelanelan'ireo mpividy sy mpivarotra amina faritra samihafa eran-tany, amin'ny alàlan'ny tsena over-the-counter (OTC). Ary, mandeha tsy miteny fa mila mampiasa broker ianao hidirana amin'ity tsena ity.
Noho ny sata mifehy azy io, ny fisafidianana ny marika mety dia midika hoe tsy fitoviana ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazan'ny ezaka ataonao Forex. Raha misy mpivarotra marobe maro eny an-tsena manolotra vokatra sy serivisy mitovitovy amin'izany, dia tsy maintsy fantarinao ireo karazan-jiro isan-karazany amin'ny alohan'ny hidirana amin'ny varotra Forex.
Amin'ny ankapobeny, misy karazana brokers roa ao amin'ny tsenam-barotra Forex: Mpanamboatra tsena sy mpivarotra ECN. Araka ny lazain'ny anarana, ny Makers Market dia ireo karazana mpivarotra mametraka ny tolotra ary mangataka vidiny amin'ny alàlan'ny rafitra azy manokana 'ka mahatonga ny tsena'. Ny vidin-dry zareo dia aseho eo amin'ny lampihany amin'ireo mety mpamatsy vola afaka manokatra sy manidy ny toeran'ny varotra.
ECN - Ny karazana 'madio indrindra' mpivarotra varotra forex any
Raha oharina amin'ny mpanamboatra tsena, ny Network Communication Network (ECN) mpivarotra tsy mahazo tombony amin'ny fampielezana miparitaka, fa manolotra vaomiera amin'ny vaomiera amin'ny toerany. Vokatr'izany dia ny fandresen'ireo mpanjifany dia ny fandreseny manokana raha tsy izany dia tsy afaka mahazo tombony izy ireo.
Mpiasan'ny ECN dia manam-pahaizana ara-bola izay mampiasa ny tambajotra elektronika maoderina hampifandraisana ny mpanjifany amin'ireo mpandray anjara amin'ny tsena hafa. Ny fampifangaroana teny an-tsehatra avy amin'ireo mpandray anjara samihafa, ireo brokers ECN dia afaka manolotra tolotra marefo / mangataka fiparitahana.
Ankoatra ny fanabeazana andrim-bola lehibe sy mpivarotra tsena, ireo brokers ECN koa dia mikarakara ireo mpanjifa mpivarotra tsirairay. Ny ECN dia mamela ny mpanjifany hifanakalo varotra amin'ny tsirairay avy amin'ny alàlan'ny fandefasana tolotra ary manolotra eny amin'ny lampihazo rafitra.
Anisan'ny mahasarika ny ECN dia ny mpividy sy ny mpivarotra dia tsy mijanona anarana amin'ny tatitra momba ny varotra. Ny varotra amin'ny ECN dia mitovy amin'ny fifanakalozana mivantana izay manolotra tolotra tsara indrindra / anontanio ny tahan'ny vidin'ny vola rehetra.
Amin'ny alàlan'ny ECN, ny mpivarotra dia mahazo vidiny tsara kokoa sy ny toe-barotra mora vidy toy ny ECN broker dia afaka mamela ny vidiny amin'ny mpamatsy fiantraikany samihafa. Fanampin'izay, ny tontolon'ny varotra nomen'ny broker an'ny ECN dia mahomby kokoa sy mangarahara ary manampy koa ny fiantsoana ny e-varotra.
Ny tombony ECN - Nahoana ianao no tokony hiantsena amin'ny mpivarotra ECN
Mampiasa an ECN broker manana tombony maro; raha ny marina dia mpivarotra marobe no miandrandra brokers ECN, ary noho ny antony tsara. Ny brokers ECN dia manolotra karazana tombontsoa lehibe, izay mety hanampy azy ireo mialoha ny mpiara-miasa aminy. Ireto misy tombony lehibe sasany amin'ny fampiasana broker ECN.
Fahafantarana anarana, tsiambaratelo ary tsiambaratelo
Matetika boky misokatra ianao rehefa miatrika varotra Forex mahazatra. Na izany aza, ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo dia mitana lanja lehibe rehefa misafidy ny hidina amin'ny làlan'ny mpivarotra ECN ianao. Ny haavon'ny tsiambaratelo sy ny tsiambaratelo dia misy ifandraisany amin'ny hoe mpiambina eo an-tsena ihany no miasa amin'ny tsena fa tsy mpanamboatra tsena.
Ny mpivarotra dia omena fidirana tsy misy fitsaharana amin'ny vidin'ny tsena amin'ny alàlan'ny ekoatin'ny ECN sy kaonty natokana. Satria miovaova ny vidiny raha ny vidin'ny, ny fangatahana, ny tsy fahatomombanana ary ny tontolo manodidina ny tsena, amin'ny alàlan'ny mpivarotra ECN marina, ny olona iray dia afaka mifampivarotra amin'ny fampielezana tolotra tena ambany / tolotra.
Fanatanterahana ny varotra haingana
Ity endri-javatra ity dia zavatra tsy azon'ny mpivarotra Forex mampandefitra ireo. Ny brokers ECN dia manome antoka fa ny fahombiazan'ny varotra dia mahomby tokoa isaky ny mandeha. Ity teknikan'ny varotra manokana ity dia tsy mila ny mpivarotra hifanakalozana amin'ny mpivarotra, fa kosa mampiasa ny tamba-jotra hametrahany ny baiko. Ity fomba samy hafa ity dia tena mamela ny rehetra hahafaly ny fanatsarana varotra.
Fandraisana amin'ny mpanjifa sy ny etika
Ny mpandraharaha ECN dia miasa amina modely iray izay mamela ny rehetra sy ny fahafahana rehetra hivarotra ao anaty oniversite likiran-tsivana iraisan'ny andrim-panjakana manana fomba fiaina ara-bola, mahay mifehy ary mahay. Ho fanampin'izany, noho ny fampitana ny fampitana fampitana fampitana, ny fangaraharana dia tombony lehibe iray hafa an'ny ECN broker. Ny agence rehetra amin'ny ECN dia omena alalana amin'ny data sy varotra mitovy amin'ny tsena; noho izany, azo antoka ny fangaraharana ny vidin'ny tsenan'ny mpanome tolotra betsaka.
Iray amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny broker ECN sy kaonty varotra Forex mifandray dia ny tsy fivarotana varotra. Raha jerena ny toetran'ny varotra Forex, dia tsy ilaina ny fiatoana ary tsy mitranga mihitsy eo anelanelan'ny varotra. Rehefa manararaotra broker ECN ianao dia afaka am-barotra am-pahatokisana mandritra ireo hetsika sy vaovao, satria mety hiteraka asa tena izy io. Izy io koa dia miteraka fotoana ahafahan'ny mpivarotra mahazo tombony amin'ny volatility vidin'ny Forex.
Inona avy ireo tombontsoa FXCC-ECN?
Ny hetsika ara-barotra ECN dia tsy mitonona anarana, izany dia ahafahan'ny mpivarotra manararaotra ny vidin'ny vidin-tsolika, ary manome antoka fa ny toe-pahasalamana tena izy dia hita taratra amin'ny fotoana rehetra. Tsy misy ny vahaolana manohitra ny torolalan'ny mpanjifa mifototra amin'ny: ny paikady ara-barotra, tetika, na ny tsena amin'izao fotoana izao.
Ny famonoana mivantana ny varotra
Ny mpividy FXCC-ECN dia afaka manofa forex avy hatrany, manararaotra ny vidiny mivantana mivantana, mivantana, ary tsara indrindra amin'ny tsena, miaraka amin'ny fanamafisana avy hatrany. Ny modelin'ny FXCC-ECN dia manakana ny fanelingelenan'ny mpametaveta, noho izany dia ny fividianana FXCC no farany ary voamarina raha vao vita sy feno. Tsy misy birao mifandraika amin'ny adiresy, tsy misy intsony ny famerimberenana indray.
Mpanjifa, fidirana amin'ny liquidity
Ny modelin'ny FXCC ECN dia manome ny mpanjifa ny fahafahana hivarotra amin'ny sehatry ny liquidity maneran-tany amin'ny rafitra ara-bola, mahafeno ary mahomby.
Automatique forex commerce / tsena data feed
Amin'ny alalan'ny fampiasana ny API an'ny FXCC, ny mpanjifa dia afaka mampifandray mora foana ny algorithms ara-barotra, mpanolotsaina manam-pahaizana, modely ary rafitra fitantanana ny risika amin'ny tsenan'ny data mivantana sy ny vidin'ny milina mifanentana. Ny tahiry mivantana mivantana mivantana mivantana ny fxCC, tsy manara-dalàna, dia misy ny sanda mety indrindra amin'ny fifaninanana ary mangataka ny vidiny azo omena amin'ny fotoana mety amin'ny tsena. Vokatr'izany, ny fivarotana varotra dia mijanona ho azo antoka sy tsy miovaova rehefa miverina modely fanandramana ara-barotra, na amin'ny fivarotana mivantana.
Ny FXCC dia samy hafa amin'ny mpivarotra na mpanamboatra tsena satria ny FXCC dia tsy mifehy ny fandefasana / fikarakarana, ka noho izany dia tsy afaka manome ny fandaniana na ny fanomezana atolotra amin'ny fotoana rehetra. Ny FXCC dia manolotra fitohitohinana marina.
Amin'ny ECN, ny mpanjifany dia manana fidiram-bola mivantana. Ny vidin'ny varotra dia manjavozavo ny fitaterana, ny fangatahana, ny fahavitrihana ary ny toe-javatra hafa. Ny modely FXCC-ECN dia manome fahafahana ny mpanjifa hampivelatra tsikelam-bidy / fandefasana tolotra, izay mety ho ambany noho ny pipa iray amin'ny sehatra sasany amin'ny toe-javatra sasany.